Mitohy ny fahadisoany | Hevitra MPANOHARIANA |
Mitohy ny fahadisoany
2010-05-27 @ 22:09 in Politika
Toe-javatra somary nampisaritaka ny tontolo politika teto Madagasikara ihany ilay raharaha nanafihan'ny FIS sy ny Emmoreg ny tobin'ny zandarimaria avy ao amin'ny FIGN mifanila amin'ny Fasan'ny mahery fo eny avaratr'Ambohitsaina. Maro ihany ny lasa saina hoe tena izy ve iny sa fihetsika namboamboarina? Tranga iray hitan'ny besinimaro manko dia lalana iray ilay mananika an'Antanimora iny ihany no nifoforan'ny FIS sy ny Emmoreg nananihana na dia misy izao aza ny lalana hatraty Ampasampito sy tsy maninona koa ny milaza hoe Ambohitsaina. Raha tafika miisa 600 lahy izany ve tsy mba mety ihany raha nozaraina telo dia samy misy 200 avy ohatra. Nodinihako tokoa ilay tranga ary dia tahaka izao no hitako nanaovan'ny FIS sy ny Emmoreg ny teti-panorony.
Manamboninahitra iray dia ny Kolonely Richard no nitarika ny Emmoreg, mety ho tsy matoky loatra ireo lefiny izy na tsy manana lefitra eo amin'ny fibaikoana koa dia nataony tarika iray ihany ny vondro-tafika nentiny. Faharoa, mety hisy hitsimbadika tampoka ny sasany ao amin'ny andian-tafika na zara fa manatontosa ny asany koa dia naleo lalana iray ihany no nomasahina. Miharihary amin'ny rehetra fa tsy manaraka ny baikon'ny Kly Richard loatra ny avy amin'ny FIS fa te-hanava-tena ho manana ny maha-izy azy. Izay toe-javatra izay dia efa nampisy ny fisaritahana teo amin'ny fibaikoana ka nahitana soa aman-tsara fa ny iray mbola mitady fifampiresahana nefa ny hafa manohy ny fanafihana ataony hatrany. Misy zavatra tsy mifandrindra eo izany.
Manaraka izany, toy ny mazava avy hatrany ny tanjon'ny avy amin'ny FIS fa ry zareo no miavaka indrindra ary ao amin-dry zareo no misy ny sangany sy ny mahery fo indrindra. Tsy dia natao mahagaga loatra raha ilay tena sahy indrindra sady atokisan'ny lehibeny indrindra no lavo teny an-tany fiadiana. Io fahalavoana io no nahamaimbo ra ny FIS ka mety ho nifampitenenandry zareo fa tsy maintsy mahalavo iray amin'ny ankilany koa ry zareo farafaharatsiny ho sandany... Dia lasa tsaho amin'izay moa ny resaka isan-karazany manaraka, ny fijoroana vavolombelona sisa no somary azo itokisana dia ny fandrobana nataon'ny FIS ny tao an-toby rehefa tafiditra tao ry zareo, ny fanerena ny Jeneraly mpifehy voalohan'ny toby hanangana saina fotsy ho marika fa nandresy ry zareo mpanafika. Ao anatin'ny tsaho kosa ny filazana fa tsy nisy fitaovam-piadiana teny amin'ilay zandary nolazaina fa FIGN dia no tarihina teo amin'ny kianja filalaovana no notifirina manta fotsiny.
Vokatr'izay fandresena izay dia nahazo tambin-karama somary betsaka ihany raha oharina amin'ny vola fandrain'ny Malagasy eto an-toerana ny FIS raha tsy nandrenesana na inona na inona kosa ny tany amin'ny Emmoreg. Moa ve tsy tsapan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa fanasaraham-bazana ny samy ao amin'ny tafika izany fihetsika izany? Raha tena maharo azy manokana ny FIS dia mety ho avy tsy ho ela ny fitsapan'ny hafa rehetra izany vaikan'ny FIS izany miohatra amin'ny vondrona hafa rehetra. Tsy nijanona hatreo ny fiangarana fa tsy mbola nahay nitondra tena ho mendrika izany hoe filohan'ny Malagasy manontolo izany ny sasany fa na samy nisy aza ny lavo dia izay mahery fo heveriny ho miaro azy ihany no nomeny voninahitra, toy ny fanaporofoana fa tena efa misara-bazana tokoa ny samy Malagasy ka ny ankolafy heveriny ho azy ihany no novangiana...
Farany, raha heverin'ny sasany ho fandresena ho azy ilay fifanarahana fitrandrahana vy goavana any amin'ny faritra Soalala dia mety ho tsy ampoiziny ny tohin'io resaka io. Tsy te-hilaza zavatra betsaka aho fa na dia ny hery mpanohana azy aza hihataka aminy noho io fifanarahana iray io. Koa manao fahadisoana ny mpitarika avy amin'ny hery mpanohitra rehetra raha mijanona fotsiny amin'izay fa tsy maintsy tohizana io tolona io.
Jentilisa, 28 mey 2010 amin'ny 00:08